Monday May 13, 2019 - 11:50:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraatka ayaa lagu sheegay in weerar qarbudaad ah ay lakulmeen illaa afar Markab oo marayay meel ku dhow Imaarada Alfujerah oo kamid ah gobollada wadankaasi.
Maraakiibta oo shidaal kasoo qaaday dhanka dalka Sacuudiga ayaa la sheegay in waxyeello xooggan ay kasoo gaartay weerarka qarbudaadda ah oo aan illaa iyo hadda la ogeyn cidda fulisay.
Khaalid Alfaalix oo ah wasiirka arrimaha Tarmarta dowladda Sacuudiga ayaa sheegay in laba kamid ah Maraakiibta shidaalka Xambaara ee dowladda Sacuudiga ay lakulmeen weerar qarbudaad ah, wuxuu sheegay in aysan jirin waxyeello sababtay in shidaalku daato balse ay waxyeello weyn maraakiibta kasoo gaartay dhanka badhismeedka hoose.
Dowladda Sacuudiga waxay caddeysay in mid kamida Maraakiibta uu kusii jeeday wadanka Mareykanka balse uu kusii hakan lahaa dekad kutaal wadanka Imaaraatka Carabta.
Weerarkan lagu qaaday maraakiibta ganacsiga dowladaha Khaliijka Carabta ee isbahaysiga la ah Mareykanka ayaa imaanaya xilli ay cirka iskusii sharaarayso colaadda udhaxaysa Iiraan iyo Mareykanka ee ku aaddan Marin Biyoodka caalamiga ah ee Hormuz.
Dowladda Mareykanka ayaa bil walba lacago Boqolaal Milyan oo dollar ah dowladaha Khaliijka uga qaadata in ay u ilaalinayso amnigooda gudaha iyo dibadda balse waxaa muuqata in ballan qaadkaas uu beenoobay.
Dhageyso: Barnaamijka Diiradda Jimcaha Oo Lagu Falanqeeyay Jarista Dhirta.